Ozu abụba pasent mgbako-enye
Ozu abụba pasent mgbako-enye gị ohere gbakọọ dị iche iche parameters ahụ gị, dị ka gị ezigbo arọ, ozu abụba na ozu abụba pasent, na ibu ibu na-enweghị abụba, aru udi ụdị, basal metabolism, arọ ọnwụ metabolism na ndị ọzọ. Ọ wepụtara dabeere na gị mmekọahụ, afọ, ibu ibu, ahụ nha na ọrụ larịị.
Seks: Nwanyi Nwoke
cm ụkwụ / sentimita asatọ
Ezu ike obi ọnụego:
Gbakọọ dị ka nkezi nke 3-5 nha nke ọnụ ọgụgụ nke obi gafere kwa nkeji ke usenubọk mgbe n'ụra bed.
N'úkwù (na thinnest ebe):
A, nke a bụ ebe n'elu otube.
cm Sentimita asatọ
N'úkwù (widest akụkụ):
Setịpụ aka gị yiri ya n'ala. Ehulata gị pụta ìhè ogwe aka 90 ogo ka gị aka bụ perpendicular ka n'ala. Eji mkpịsị aka ukwu na mkpịsị aka na forefinger nke aka nke ọzọ na tụọ anya n'etiti ọkpụkpụ. Tụọ aka anya (n'etiti gị isi mkpịsị aka na mkpịsị aka na forefinger) na a n'ọtụtụ na-adịghị gị ikiaka obosara.
Arụ Ọrụ larịị:
Ezipụta gị si ebi ndụ ọrụ larịị.
anọkarị otu ebe ọrụ ìhè ọrụ nkezi ọrụ ezi ọrụ kacha ọrụ
Nzube nke egwuregwu:
Ezipụta nzube nke egwuregwu na-eme.
-enweta ezi ahụ udi Arọ ọnwụ -amụba ume egwuregwu ahụ controversial sports
Otú ọtụtụ calories gị ọkụ (efu nke calories) na-agba ọsọ, na-eje ije, na-egwu mmiri, na na.